Tresaka Archives - Page 90 sur 133 -
“Tsy mahazaka … ”
Hatramin’izay nahazoantsika ny fahaleovantena, 57 taona lasa izay, dia azo isaina amin’ny rantsan-tanana ny Filoham-pirenena sahy nanapotsitra ny adihevitra manodidina ny tontolon’ny Fitsarana eto amintsika. Ny antony dia sehatra iray saro-pady ny Fitsarana ka tsy …Tohiny
«Manga ny lanitra!»
Maro ireo olona nanana ny maha izy teo amin’ny sehatra izay nampisongadina azy no nampiasan’ireo mpanao politika ary tena niasa sy nanompo azy mihitsy mba tsy hilazana hoe nanao sorona ny ainy. Nomena izay rehetra …Tohiny
Asehon-dRavalomanana Marc amin’ny fihetsiny sy ny fanambarany fa tsy miraharaha izany fahazoan-dalana izany ny tenany ka tsy maintsy hanatanteraka ilay hetsika famoriam-bahoaka etsy Mahamasina. Hatramin’ny androany aloha izany dia mbola ny hiditra ao amin’ny kianjaben’i …Tohiny
«Tsy manan-tsiny!» :
Isan’ny tetikady mahomby rehefa hanozongozona fitondrana ny fampiakarana ambony dia ambony ny tsy fandriampahalemana na an-tanàn-dehibe na ambanivohitra. Misy ifandraisany amin’ny raharaham-pirenena ny firongatry ny tsy fandriampahalemana ary tsy vao izao akory no nahafantarana izany. …Tohiny